Tareenka cusub ee Xawaaraha Sare Saaranaya Muuqaalo Hore Oo La Wadaago | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSawirada koowaad ee Tareenka cusub ee Xawaaraha Sare Wadaag
10 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Sawirada ugu horeeya ee tareenka xawaaraha sare leh oo la wadaago
Qadka weyn ee Jarmalka Siemens Tareenka cusub ee Xawaaraha Sare ee loo yaqaan 'Speed ​​Speed ​​Train' (YHT) ee TCDD ayaa la soo saaray. YHT, oo aadi kara kilomitir 300 saacaddiiba, ayaa ujeeddadeedu tahay inay siiso rakaabku raaxo iyo khibrad raaxo leh.
2018, TCDD waxay la saxeexday 12 milyan oo euro oo ay la gashay shirkadda Siemens, shirkadda tignoolajiyada ugu weyn ee Yurub, ee soo saarista 340 Xawaaraha Xawaaraha Sare (YHT). Shirkadda cusub ee loo yaqaan '' NYT ', oo loo qaaday Xarunta Dayactirka Tareenka Sare ee Xawaaraha ee Etimesgut, ayaa loo adeegsan doonaa 2020 kadib imtixaannada la qaadayo.
TCDD waxay fidineysaa shabakadeeda Xawaaraha Xawaaraha Sare waxayna dooneysaa inay ka mid noqoto adeegyada gaadiidka ugu horreeya Yurub ee duulimaadkan. Ururka, oo horey u haystay 19 YHT, ayaa tiradan u kordhin doona 31 iyada oo heerarkan cusub laga soo qaaday shirkadda weyn ee Jarmalka ee Siemens.
Sida laga soo xigtay Habertürk, cusbada cusub ee 'NYT' waxay la timid hal-abuurnimo badan. Masuuliyiinta, rakaabka rakaabka marka la eego tirada kuraasta iyo miisaska ku yaal maqaayadda qaybta 16'dan 36'ya ayaa gudubtay. Intaa waxaa sii dheer, tirada godadka maraakiibta ayaa la kordhiyay si loogu oggolaado rakaabku inay si fudud uga qaadaan taleefannadooda iyo laptop-yada. Intaa waxa u dheer, baabuur kasta wuxuu leeyahay qayb laba-kursi gaar ah loogu talagalay rakaabka naafada ah.
Maanta, TCDD, oo bixiya adeegga Tareenka Xawaaraha Sare ee udhaxeysa Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-Konya, Eskişehir-İstanbul iyo Konya-İstanbul, waxay martigelisay qiyaastii 53 milyan oo rakaab ah ilaa maanta. Shirkadda cusub ee loo yaqaan 'YHTs' oo ay soo saartay shirkadda Siemens ee xarunteedu ku taal Düsseldorf, Jarmalka, ayaa loo qorsheeyay inay gasho adeegga laga bilaabo Febraayo 2020. Gawaarida Tareenka Sare ee loo yaqaan 'Valero' waxay awoodi doonaan inay gaaraan 300 kiiloomitir saacaddii. (Webtekno)
Alstom, TCDD iyo 12 Tareenka Xawaaraha Sare leh oo Loogu Talo Galay 2 sano oo ah dayactirka…
Ogeysiiska Qandaraaska: Kireysiga Tareenka Xawaaraha Sare
Xaraashka TCDD 5 ee tareenka xawaaraha sare ayaa la joojiyay
Waxaa loo furay iibsashada tareenka loo isticmaali doono dib-u-cusboonaysiinta dhismaha metrooga Ankara
Waxaa jira tareen seddex geesood ah oo u dhexeeya Adapazarı Station iyo Arifiye Station.
Ogaysiiska Qandaraaska: Dayactirka MT 15005 Train Set
TCDD Tareenka Ugu Dambeeya ee Firfircoon Ma La Wadaagi Karo
wax soo saarka tareenka xawaare sare
Xarunta Dayactirka Tareenka Xawaaraha Sare
Tilmaamaha cusub ee Tareenka Sareeya ee Xawaaraha Sare